21 March: Maalinta Caalamiga ee Keymaha | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka March 21, 2017	0 240 Views
Muqdisho (Himilonews) – Goob tiro baaxad sarreysa leh oo geedo ah ayaa si guud loogu yeeraa Keyn. Keymaha ifka oo dhan ku camiran waxay cabbirka dhulka kaga fadhiyaan 30%. Si kastaba, waxaa jira hoos u dhac la tilmaami karo oo ku socda baaxadda keymaha oo awalba boqolkiiba 50% ka aheyd dhulweynaha dunida.
Si kastaba, QM ayaa bishii 21 March sanadkii 2012 waxay bilawday xuska maalinta si loo muujiyo faa’iidooyinka keymaha iyo geedaha. Xaqiiqooyinka jira ee ku saabsan keymaha waa kuwa is daba-maal ah – oo in kasta oo dabargo ay ku jiraan meelaha qaar ay hadana helayaan dadaallo lagu ilaalinayo laguna tarminayo tiradooda.
Halka aad looga dooday in si toos loo abbaaro tirada geedaha sameeya keymaha, hadana saynisyahannadu waxay hoosta ka xarriiqeen inay jiraan boqollaal bilyan oo geedo ah. Nasiib-darrase, cilmi-baarista seynisyahannada ayaa tilmaantay in 15.3 bilyan oo geedo ah in la dabar-jaro sanad kasta – 46% geedaha dunida waxay noqdeen ciribtiran 12,000 sanadood lasoo dhaafay. Waxaase kasii naxdin badan in dunidu ay sanad kasta lumiso dhul baaxadeed ballaaran oo keymo ah. Waxayna badigood u le’daan falalka ay ku hayaan bani’aadanka.
Soomaalidu waxay kamid tahay bulshooyinka xaalufinta geedaha sameeya hab-nololeedka keymaha aad ugu fogaaday.
Marka aan eego sida bulshadeennu u tarmayso iyo siday u ciribtirayso deegaanka, waxaa iskukey qaadan waaya murtidii laga qabtay madaxweynihii 26aad ee Maraykanka, Theodore Roosevelt oo noolaa intii u dhaxeysay sanadihii 1858-1919 kaas oo yiri: “Dadka aan laheyn carruur dhaxasha waxay wajahaan mustaqbal rajo la’aan ah; dal aan laheyn geedo badanna, malahan kaalmo.”
In kasta oo aan ka cabsi qabin inaan dad ahaan u dabargo’no, hadana waxaan ka walwal qabaa inaan dal la’aan ku danbeyno. Waaayo waxa ku socda deegaanka uma baahna falanqeyn iyo iftiimin toona. Waxay halhaleel ugu baahan tahay wax ka qabashao iyo tarmin si aynan u wajihin mustaqbal qaraar badan.
Taas waxay imaan kartaa marka dowladda iyo ururrada kale ee bulshada ay muhiimadda hore ee mudnaanta ay siiyaan xaaladaha kale. Sida aan horay i iri; dal-laawaha mustaqbalka ma ahan midka misaarta u sita geedaheenna, waa kaan aqoonin waxa deegaanku ugu fadhiyo, waxaynu baahannahay inaan bulshada ku baraarujinno muhiimadda geedaha, daryeelkooda iyo tarmintooda. Taas waxaan ku hubsan karnaa inaan u foojignaano yareynta iyo idleynta dhibaatooyinka ku shubmaya oo xaalufintu kow ka tahay.
Kala xiriir; farriin-danabeed: hiraal86@gmail.com
Next: Doorka Keymaha iyo Kaalinta Deegaanka
Wax Ka Baro GERIGA
Qeybtii 1aad; Dhurwaaga ama Waraabaha